DID: October 2007
Posted by Democratic Information Department at 1:03 PM6comments Links to this post
တချို့ မွေးဖွားခဲ့ကြ၏၊တချို့ သေဆုံးခဲ့ကြ၏၊ထိုမွေးဖွားခြင်းနှင့်သေဆုံးခြင်းတို့ အကြားမှ ထို
သောမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသားများ ဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦး(မကဒတ)၏၁၉နှစ်ဆိုသော ခရီးမိုင်
တိုင်တခုအားမိမိတို့၏အရှေ့တွင်မားမားမတ်မတ်ဖြစ်တည်နေသည်ဟုဆိုလျှင်မိမိတို့ အနေဖြင့် ဝမ်းသာ
ပီဖြစ်ရမည်ဟုဖွင့်ဆိုချင်ပေသည်၊ဝမ်းသာစရာများထဲမှဝမ်းနည်းဖွယ်ရာဖြစ်ရပ်များကား ယနေ့ အချိန်၌
မိမိတို့ အနေဖြင့်တပ်ဦးနှင့်အလှမ်းဝေးနေရခြင်းဟုဆန်းစစ်မိတိုင်း၁၉နှစ်တာခရီးတခု အတွင်းအသက်နှင့်
ရင်းဆပ်ခဲ့ရသောမိမိတို့ ညီတော်နောင်တော်များ၏ညီးတွားသံများ၊ငိုရှိုက်သံများ သည်မိမိတို့ ၏နားစည်
သို့ အဆက်မပြတ်ထိမှန်လျှက်ရှိနေသည်ဟုခံစားသိရှိရမိပေသည်။ မည်သို့ ပင်ဆိုစေကာမူ ထို၁၉နှစ်တာ
ခဲ့သူတို့ ၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်တခုသည်ခရီးလမ်း တဝက်၌သာအဆုံးမသတ်သေးဘဲရှိနေသေးသည်ကို
မိမိတို့ နေဖြင့်မျက်ဝါးထင်ထင်တွေ့ မြင်နေ ရပေသည်။ နားလည်မှုဖေးမပံ့ပိုးမှုများနှင့်တူညီသောခရီးတခုကိုသွားရန်ဆန္ဒရှိသူတိုင်းခေတ်စံနစ်ရိုင်းတခုမှလွတ်
မြောက်ရန်အတွက်လက်ချင်းဆက်ရမည်ကိုမိမိတို့ ၏မွေးရာပါအသိတရားတခုအနေဖြင့်စွဲကိုင် သွားရ
မည်မှာမိမိတို့ ၏မဟာတာဝန်ကြီးတရပ်ပင်ဖြစ်၏။ မုန်တိုင်းနှင့်မီခိုးတို့ သည်ကားလွင့်ပြယ်ပျောက်ပျက်
စေသောသဘောကိုဆောင်ပေ၏ ၊ မိမိတို့ သည် မုန်တိုင်းမဟုတ်သလိုမီးခိုးများလည်းမဟုတ်ကြပေ၊
နေ့ ရက်ရာသီတူညီအကိုမောင်နှမများသာဖြစ် ကြပေ၏။ ထို့ ကြောင့်မိမိတို့ ၏တူညီသောစိတ်ဓါတ်များ
သည်ကားမီးခိုးကဲ့သို့ ပျောက်ကွယ်လွင့်ပါးတတ်သော ဆေးပြယ်ပန်းချီကားများမဖြစ်နိုင်ပေ၊
ထိုနည်းတူမုန်တိုင်းကဲ့သို့ အစိုးမရသောသဘောကိုလည်း မဆောင်နိုင်ကြပေ၊
တနည်းအားဖြင့်ဆိုသော်မိမိတို့ သည်အရွေ့ရှိသောအချိန်ရထားကြီးတစင်းကို အစဉ်မပြတ်ခုတ်မောင်း
နေကြသောမောင်းနှင်သူများသာဖြစ်ကြ၏။ မိမိတို့ အထဲမှတချို့ ကလည်းထို ရထားကြီးကိုမောင်းနှင်ရ
တိုင်တခုဆီသို့ သာဦးတည်နေ သည်ကိုမိမိတို့ အနေဖြင့်ထင်ရှားစွာတွေ့ မြင်ရပေမည်၊ထို့ ကြောင့်မိမိ
စီးရာပျက်စီး ကြောင်းတို့ သည်မောင်းနှင်သူနှင့်စီးနင်းသူအားလုံးအပေါ်တွင်တည်မှီနေပေ၏။ ထိုခရီးရှည်ရထားကြီးအားခရီးဆုံးအောင်မည်သို့မည်ပုံမောင်းနှင်ရမည်စီးနင်းရမည်ကိုကားစာဖတ် သူတို့၏အသိသတိနှင့်ယှဉ်၍ဆောင်ရွက်ရမည်ဟုနားလည်ခံယူရမည်ဟုယူဆကြပါလျှင်ကားမိမိတို့ အနေဖြင့်ဤစာစုကိုရေးရကျိုးနပ်ပေသည်ဟု ..............။
Posted by Democratic Information Department at 3:05 AM0comments Links to this post
ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှ သံဃာတော်အသျှင်သူမြတ်များ၊ ဒါယိကာ၊ဒါယိကာမ များခင်ဗျား
နာယကဆရာတော်ကြီး၊ ဥက္ကဌ ဆရာတော်ကြီးနှင့်တကွ သံဃာ့ဥသျှောင် သို့လျှောက်ထားလို
သည်များ တိုင်ကြားလိုသည်များ၊အကြံပေးလိုသည် များ၊ အသိအမှတ်ပြုထောက်ခံလိုသည်များ
စာနှင့် print ထုတ်ပြီး ပီနန်ဆရာတော်ကြီး၏ လက်ဝယ်အရောက်ယူဆောင်သွားပေးပါမည်။
ပီနန်ဆရာတော်ကြီး နောက်လဆန်း (နိုဝင်ဘာ ၅ ရက်)အထိအယ်လ်အေတွင်သီတင်းသုံးလျှက်
ရှိနေပါမည်။မိမိ၏အမည် ၊နေရပ်အားပူးတွဲလျှောက်ထားဖေါ်ပြလိုပါက Editor သို့ တိုက်ရိုက်စာပို့
မန္တလေးဂေဇက် မှ သတင်း၊စာနယ်ဇင်းစည်းကမ်းများအတိုင်း တိကျစွာအကျိုးတော်ဆောင်ပေး
၇န်ကုန်။ ။အောက်တိုဘာ ၃ဝ
ကိုသူရ (ဇာဂနာ)ကိုမနေ့ညနေ(၃းဝဝ)နာရီကခေတ္တဖမ်းသွားပြီးဒီနေ့(အောက်တိုဘာ ၃ဝ ရက်)မနက်(၈းဝဝ)နာရီမှာပြန်လည်လွှတ်ပေးလိုက်ကြောင်းသိရသည်။
ဂီတဂန္ထ၀င်မိခင်မာမာအေးရဲ့ သူမ၏ဂီတရဲဘော်များသို့ အမှတ်တရ
ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် သီချင်းကို ရေးစပ်ခဲ့တဲ့ ကိုလေးညွန့် ကွယ်လွန်ရှာပြီ။ကိုမိုးသီးလင့်တွင်ဖတ်နိုင်ပါသည်။
Posted by Democratic Information Department at 9:29 AM0comments Links to this post
ရန်ကုန်။ ။ အောက်တိုဘာ ၂၉။
ဖို့ တ်ဝိန်းမှာဒီနေ့ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးတလပြည့်အတွက်ရည်စူးပြီးကောင်းမှုကုသိုလ် ပြုကြတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကြည့်လိုက်ပါအုန်း အောက်က link ကို click နှိပ်လိုက်
Posted by Democratic Information Department at 1:11 AM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 11:18 PM0comments Links to this post
ရလိမ့်မယ်လို့ မထင်နဲ့ 
လက်ဆင့်ပွားရတော့မှာပါဘဲ၊ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက် နေ့ရန်ကုန်သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ကြီးမှာ
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးကြီးကိုဆက်လက်ပုံဖေါ်နေကြသလို Rock,Punk , Hiphop ပွဲတွေနဲ့ အဆိုတော်တွေက သံဃာတော်တွေ ၊ ကျောင်းသား ၊ပြည်သူ တို့ ရဲ့သွေးတွေ ၀ိညာဉ်တွေပေါ်မှာ
မျောက်ကက နေကြတဲ့ပုံကို တင်ပေးလိုက်တယ် ၊ Pioneer Club Hiphop Show မှာ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် ၊
ဂျေမီ ၊ ရသ ၊ရဲလေးပါဝင်ပြီး ကန်တော်ကြီးကျွန်းမျှော်စင်မှာတော့ အဲလက်စ်၊ရင်ဂို၊ဖြူဖြူကျော်သိန်း၊
မောင်မောင်ဇော်လတ်၊BigBag,Black Hole နဲ့ The Ants အဖွဲ့ တို့ ပါဝင်တယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။
အမှန်တရားနဲ့ လူထုဆန္ဒကိုမည်ကဲ့သို့ သောအောက်လမ်းနည်းနဲ့ ဖြစ်စေဖုန်းကွယ်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် တေးသံရှင်ခင်စန်းကြည်ရဲ့ အိုဘယ့်တံချူရှင်သီချင်းစာသားထဲကလို "ရလိမ့်မယ်လို့ မထင်နဲ့ ....ရလိမ့်မယ်လို့ မထင်နဲ့နွမ်းလျက်သာစော အမောသာအဖတ်တင် ...... "လို့ဘဲပြောလိုက်ပါရစေ။
Posted by Democratic Information Department at 7:19 PM0comments Links to this post
Statement by Hla Tun, Governor of for Myanmar at the World Bank/IMF Annual Meetings (October 20-22, 2007)
Statement by the Hon. Hla Tun,Governor of the Bank for Myanmar,at the Joint Annual Discussion
Posted by Democratic Information Department at 1:48 PM0comments Links to this post
ရန်ကုန်မြို့ တော်ကပြည်သူ့ ဆန္ဒဖေါ်ထုတ်ပွဲ
ရန်ကုန်မြို့ ၊ ၂၆၊၁၀၊၂၀၀၇
ရန်ကုန်မြို့တော်တွင်လူငယ်များကလည်းအင်းယားကန်ဘောင်ပေါ်၌မီးပုံးပျံအနီရောင်များတွင်KillerThanShwe ဟူသောစာများရေးကာမီးပုံးပျံများအားလွှတ်တင်ခဲ့ကြသည်။ရန်ကုန်တွင်ဆန္ဒပြပွဲများမဖြစ်သော်လည်းတစ်မြို့ လုံး ဗျောက်အိုးများ ၊ မီးရှူးများဆူညံစွာပစ်ဖေါက်ပြီးမိမိတို့၏ သဘောထားကိုပြသခဲ့ကြသည်။
ပါသည်။ ယခုနှစ်တွင်ဗျောက်အိုးမီးရှူးဖေါက်သူများအားအရေးယူမည်ဟုရန်ကုန်မြို့တော်အနှံ့အသံချဲ့စက်များနှင့် ကြေညာနေသည့်ကြားမှပြည်သူလူထုမှဂရုမစိုက်ဘဲမြို့လုံးကျွတ်ဗြောင်ကျကျပင်ဗျောက်အိုး၊မီးရှူးများ
ပစ်ဖေါက်နေကြ၍ရန်ကုန်မြို့ တော်အနှံ့ဆူညံနေသည်ကိုမြင်တွေ့ကြားသိရကြောင်းရန်ကုန်မြို့ တော်မှ
သတင်းရရှိပြီး ၊ ယမန်နေ့ မှပြန်လည်လွတ်မြောက်ခဲ့သောသက်တော် ၇၆ နှစ်ရှိဆရာတော်ဦးတေဇောဘာသ
Burma: New show of force in streets
UNPO, October 26, 2007
One day after the pro-democratic leader, Aung San Suu Kyi, met withagovernment liaison officer, hundreds of police returned to the streets inashow of force aiming at dissuading new anti-government rallies.
http://www.unpo. org/article. php?id=7281
Posted by Democratic Information Department at 5:07 AM 1 comments Links to this post
'Yellow color' worshippers in Shwedagon
Mizzima News, October 26, 2007
A month after the monk-led protests' in September, several people in yellow clothes gathered today in the Shwedagon pagoda in Rangoon , eyewitnesses said. Local residents, who visited the shrine, said several people came in the evening to Shwedagon, which was the central location during last month's protests, with yellow coloured candles to pray for peace.
http://www.mizzima. com/MizzimaNews/ News/2007/ Oct/106-Oct- 2007.html
Posted by Democratic Information Department at 5:02 AM0comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်စုနဲ့ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်အောင်ကြည်တို့ နိုင်ငံတော်ဧည့်ဂေဟာမှာ ဒီကနေ့ 
ညနေမြန်မာစံတော်ချိန် ၂နာရီခွဲမှာစတင်တွေ့ ဆုံကြပါတယ်၊အသေးစိတ်အားမသိရှိရသေးပါ။
မြို့ တော်ခန်းမရှေ့ တွင်စက်တင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့ ၌တကိုယ်တော်ဆန္ဒပြခဲ့သောဘုန်းဘုန်း သက်တော်၇၆ နှစ်
Message from inside Burma (Yangon, oct 24)
On the 26th Oct, some will go to Shwedagon Pagoda and some will go to Sule Pagoda. To show our support to detained monks and activists, we will wear or hold yellow materials. We will light candles, and we will also recite Metta Sutra.
May we strongly urge all the people in Yangon to join us and people in other areas to go to pagodas in their respective places?
May we request other religions to hold vigils in their religious buildings respectively?
Int'l community is focusing on the Myanmar Issue. Now is the time we have to show who we are and what we need.
Posted by Democratic Information Department at 3:36 AM 1 comments Links to this post
Full List of Australian sanctions against Burma
ကျေးဇူးပြုပြီး အောက်ဖေါ်ပြပါလင့်မှ download လုပ်ပါ...
Posted by Democratic Information Department at 3:23 AM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 1:53 AM0comments Links to this post
ရန်ကုန်ကရဲဘော်တဦးနဲ့ ဒီနေ့ နံနက်စကားပြောလိုက်ရတယ် ၊ ဒေါသတွေလည်းငယ်ထိပ်ကိုရောက်ခဲ့ရတယ်၊
ခွေးမိစ္ဆာတွေလူသတ်အောင်ပွဲတလပြည့်သဘင်ဆင်ဖို့ အနုပညာရှင်တွေကိုအသုံးချပြီးကြိုးစားနေပြန်ပြီတဲ့ ၊
အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက် မှာမွန်းလွဲ ၃ နာရီ ကနေ ညနေ ၈ နာရီအထိ ရွှေတိဂုံစေတီတော်နဲ့ Pioneer Club မှာခွေးတွေအတွက်ရန်ပုံငွေပွဲလုပ်ကြမှာဖြစ်တယ် ၊ လူငယ်တွေရဲ့အသဲစွဲ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကိုသုံးမယ်ဆိုဘဲ ၊
မြန်မာ့ဂန္ထ၀င်အနုပညာရှင်မျိုးရိုးကဆင်းသက်ခဲ့တဲ့ရော့ခ်ဘုရင်ကြီးလို့ သူ့ ကိုယ်သူကင်ပွန်းတပ်ထားတဲ့ ခွေးဖြစ်ခဲ့တဲ့မဟာတေး အဆိုရှင် ဇော်ဝင်းထွဋ်ကလည်းဆိုပေးမယ်လို့ သတင်းရပါတယ်၊
ကျုပ်တို့ ပြည်သူ့ ဘုန်းဘုန်းတွေကျခဲ့တဲ့သွေးတွေမခြောက်သေးတဲ့ စက်တင်ဘာတော်လှန်ရေးမြေမှာသံဃာ
၀ိညာဉ်တွေပေါ်မျောက်ကကပြီး ခွေးတွေရဲ့ဒေါက်တိုင်တွေအတွက်ရန်ပုံငွေပွဲကကျုပ်တို့ ဘုန်းဘုန်းတွေနဲ့ 
ကျောင်းသားပြည်သူကို တရားဝင်စိန်ခေါ်လိုက်ခြင်းဘဲဖြစ်တယ် ၊ ဒီတော့ကျုပ်တို့ ဘာလုပ်ကြမလည်း စိန်ခေါ်ပြီးရင်တော့ဘွာခတ်မရဘူးဆိုတာစစ်ခွေးတွေသိကြဖို့ ပါဘဲ၊
အနုပညာဟူသည်ပြည်သူအတွက်လို့ ခေတ်အဆက်ဆက်မြန်မာ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့သမိုင်း ဒင်းတို့ နဲ့ မှရိုင်းကြရတော့မယ် ၊ အနုပညာရှင်အပေါင်းလည်းစဉ်းစားပါနာမည်လေးတလုံး ။လက်ခုတ်သံများစွာရဖို့ 
ဘယ်သူတွေဖန်တီးပေးခဲ့လည်း ၊ ထမင်းရှင်အစစ်ဘယ်သူလည်းဆို တာ မမေ့အပ်ကြဘူး၊ ပြည်တွင်းပြည်ပကမျိုးချစ်မြန်မာကြီးများ ကိုဇာဂနာပြောပြီးပြီသံဃာအရေးလက်နှေးလို့ မရဘူးနော်၊
စိုင်းစိုင်းဖုန်းနံပါတ်ရှိတဲ့သူတွေဖုန်းခေါ်ကြ ၊ သတိပေးကြပါ၊ အနာဂါတ်မြန်မာ့အနုပညာရှင်သမိုင်းမှာအကျည်းတန်တဲ့အဖြစ်တွေမကျန်ခဲ့ရအောင်ပါ၊
နောက်တခုကလက်ဆောင်မှတ်တမ်းလေးပါ သန်းရွှေမြေးရဲ့မွေးနေ့ ပွဲမှာ အရှက်မဲ့သိက္ခာမဲ့နေကြတဲ့
အနုပညာရှင်တချို့ ပုံပါ ၊ မှတ်တမ်းတင်ထားပေးတာပါအစဉ်အမှတ်တရဖြစ်နေရန်အတွက်။
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ဖုန်းနံပါတ် 9595133305 / 951545787 (အိမ်ဖုန်း)
ဇော်ဝင်းထွဋ် ဖုန်းနံပါတ် 951661808
အနုပညာရှင်တွေအတွက် ဒေါ်မာမာအေးရဲ့မှာခြွေစကားလေး ဖို့ တ်ဝိန်းမှာမိန့်ခဲ့တာနားထောင်ပေးကြပါ ၊ အောက်ဆုံးစာမျက်နှာမှာပါ၊
Posted by Democratic Information Department at 9:09 PM3comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 10:08 PM 1 comments Links to this post
ရန်ကုန်။ ၂၃ ရက်အောက်တိုဘာ
မှစစ်ဆေးလိုသည်ဟုအကြောင်းပြဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးထိုနေ့ ည ၁၂ နာရီတွင်ပင်ပြန်လွှတ်
သို့ အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ ပြည်ပနေအလှူအတန်းရက်ရောသူမြန်မာမျိုးချစ်များသတိထားလှူကြဖို့ 
Posted by Democratic Information Department at 5:31 PM0comments Links to this post
Burma allows human rights visit
Mr Pinheiro has not visited Burma since November 2003
The military government in Burma has agreed to allow the UN's expert on human rights to visit after refusing permission for four years.
Paolo Sergio Pinheiro, who visits countries to check on their
human rights performance, made repeated requests to visit during that time.
Burmese Foreign Minister Nyan Win wrote to the UN
suggesting that Mr Pinheiro could arrive before mid-November.
The UN's special envoy to Burma is also hoping to be allowed to return soon.
Ibrahim Gambari is currently in India awaitingavisa.
On an initial visit just after the military's crackdown on mass protests in September, he met both the military and jailed opposition leader Aung San Suu Kyi.
Speaking from the US, Mr Pinheiro welcomed news of his invitation, telling Reuters news agency it was "an important sign that the government wants to engage again in constructive dialogue with the UN and the Human Rights Council".
Louise Arbour, the UN High Commissioner for Human Rights, said it was important for the UN to establish the true scale of Burma's bloody crackdown.
"We have to find out what has happened to these people who demonstrated," she told reporters in Ottawa, Canada.
"Where are they? How many - credibly - have been killed? How many are still detained [and] under what conditions?"
The timing of the invitation is significant because ofasummit of the Association of South-East Asian Nations (Asean) due to open on 17 November, the BBC's Laura Trevelyan reports from the UN.
Asean has been severe in its condemnation of the Burmese regime's repression of the protests and if Burma can be seen to be co-operating by letting Mr Pinheiro in, that could take the sting out of further criticism, our UN correspondent reports.
Mr Gambari is for his part hoping to try and start political talks between the Burmese government and Ms Suu Kyi.
The US Ambassador to the UN, Zalmay Khalilzad, has appealed for Mr Gambari to be allowed to return.
"We are calling on all those with influence to redouble their efforts to get Mr Gambari there as quickly as possible," he said.
"The Burmese have said he can come but atalater date in November. We would like to see that happen as soon as possible."
While in India, Mr Gambari is pressing for Asian nations to take the lead in resolving the political crisis in Burma.
Western nations are trying to maintain public pressure on the generals by imposing further sanctions and calling for political progress.
But diplomats say the Burmese government is most likely to respond to prodding from China and India, countries in the region with significant trade links, our UN correspondent adds.
Posted by Democratic Information Department at 10:04 PM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 9:49 PM0comments Links to this post
Commentary by U.S. first lady Laura Bush
Posted by Democratic Information Department at 1:50 PM 1 comments Links to this post
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံနဲ့၅၀၀၀ ကျပ်တန်...
Posted by Democratic Information Department at 4:56 PM0comments Links to this post
ဒီပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းကြည့်တဲ့အခါ မြန်မာပြည်ကမဟုတ်တာကအတိအကျဘဲဖြစ်ပါတယ်၊ မြန်မာမိတ်ဆွေတွေ ၊ တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေကိုလည်း အသိပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့်ဒီသံဃာအလောင်းဓါတ်ပုံသတင်းမှားကရပ်တံ့မသွားသေးဘဲ ဆက်လက်ပြန့် နေဆဲဖြန့် ဝေနေ
ကြိုးစားမှုရဲ့ ရလာဒ်အဖြစ်နိုင်ငံတကာ ထိပ်တန်းသတင်းဌာနတွေရဲ့ ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၂၀၀၇ ခုနှစ်
စက်တင်ဘာလ SAFFRON REVOLUTION ဟာလူပီသတဲ့ကမ္ဘာ့လူသားတွေရဲ့ နှလုံးသားကိုကိုင်လှုပ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်၊
အဲဒီလိုခိုင်မာမှန်ကန်တဲ့ မြန်မာပြည်တွင်းမှတာဝန်သိနိုင်ငံသားဓါတ်ပုံသတင်းထောက် တို့ ရဲ့ ကြိုးပမ်းပေးမှု
မြန်မာစစ်အာဏာရှင်တို့ ရဲ့ လူမဆန်မှုတွေကဖုံးကွယ်လို့ မရတော့ဘဲ လူသားအားလုံးရဲ့နှလုံးသားက
မြန်မာစစ်ဘီလူးတွေကတော့အမှန်တရားတွေကိုဖေါ်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့ တာဝန်သိတဲ့မြန်မာဓါတ်ပုံသတင်းထောက်တွေကိုနုတ်နုတ်စင်းပစ်ချင်နေတာပေါ့ ၊ အချို့ သတင်းထောက်တွေလည်းသတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရ ၊ အချို့ ကစစ်ခွေးတွေရဲ့ အကျဉ်းစခန်းမှာအနှိပ်စက်ခံနေကြရတာ အားလုံးသိကြမှာပါ၊
မြန်မာစစ်ဘီလူးတွေပိုင်တဲ့ မိုးလုံးပြည့်မုသားဝါဒီသတင်းဌာနတွေကိုလည်းလူတိုင်းကဥပေက္ခာပြုထားတော့ ကျွန်ုပ်တို့ ရဲ့ သတင်းဖြန့်ချီမှုတွေကိုနှောက်ယှက်ဟန့် တားဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ မြန်မာပြည်တွင်းကအင်တာနက်တွေပိတ်၊ ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ် ၊ ပြည်ပ ၊ ပြည်တွင်းအင်တာနက်စာမျက်နှာတွေကိုနှောက်ယှက်ဖျက်ဆီး ခဲ့ကြတယ်၊ နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနများရဲ့ လေးစားမှုကိုရခဲ့တဲ့မြန်မာ အင်တာနက်စာမျက်နှာများအပေါ်သတင်းတု၊သတင်းမှားတွေကိုပေးပို့ ပြီးကျွန်ုပ်တို့ သတင်းဝေငှဖြန့် ချီရေးအင်အားစုတွေရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာတွေလျော့ပါးသွားအောင်ကြိုးစားနေကြပါတယ် ၊ဒီတော့အားလုံးကိုသတိပေးချင်ပါတယ်သတင်းဖြန့် ဝေတဲ့သူတွေဟာမိမိပေးပို့ ဖြန့် ဝေတဲ့သတင်းဟာဘယ်လောက်ခိုင်မာတိကျတဲ့သတင်းဖြစ်သလည်းဆိုတာကိုသတိပြုရပါမယ်၊ နောက်ပြီးမိမိကိုသတင်းပေးပို့ သူရဲ့အီးမေးလိပ်စာကိုအသေအချာမှတ်သားထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊ နောက်အချက်တခုအကြံပြုလိုတာကသတင်းဝါသနာပါတဲ့မြန်မာအစုအဖွဲ့ တခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်နေပြီဆိုတာပါဘဲ၊ ကိုနစ်၊ကိုမျိုးချစ်၊ကိုထိုက်၊မန္တလေးဂေဇက်တို့ ပူးပေါင်းဦးဆောင်သင့်ပါတယ်၊ကျွန်တော်တို့ လည်းပူးပေါင်းလက်တွဲဖို့ အသင့်ပါလို့ အားလုံးကိုစေတနာအရင်းခံနဲ့တင်ပြလိုက်ပါတယ်၊
ဖို့ တ်ဝိန်းမြို့ ၊ အင်ဒီယာနာပြည်နယ်
Posted by Democratic Information Department at 12:08 AM2comments Links to this post
PRESIDENT George Bush expanded US sanctions against Burma's rulers yesterday, accusing them of "vicious persecution" of democracy protesters and urging China and India to step up pressure on their neighbour.
Unveiling the second package of US measures in less thanamonth, Mr Bush said he was adding more of Burma's military leaders toalist already facing sanctions and had orderedatightening of US export controls on the regime.
But inatacit admission that US steps alone would not be enough, he urged China, India and other nations in the region to "review their own laws and policies" on Burma.
"Burma's rulers continue to defy the world's just demands to stop their vicious persecution," Mr Bush told reporters. "They continue to reject the clear will of the Burmese people to live in freedom under leaders of their own choosing."
The President's latest announcement followed weeks of mostly unsuccessful international efforts to get Burma's Government to ease repression of protesters and openadialogue with detained opposition leader Aung San Suu Kyi.
The junta has keptatight lid on the country since crushing protests led by Buddhist monks that began in September and grew into the largest anti-government demonstrations in 20 years. Official media said 10 people died.
Mr Bush last month targeted 14 military leaders and toughened US measures that had been in place for years but had forced little change.
"In light of the ongoing atrocities by these men and their associates, the United States has today imposed additional sanctions," Mr Bush said yesterday.
He designated 11 more leaders under existing sanctions, includingafreeze on US assets, and also named 12 new "individuals and entities" to be covered by US penalties.
The White House said the tightening of export controls would includeaban on the sale of high-performance computers to Burma.
Mr Bush demanded that the International Committee of the Red Cross be given access to political prisoners, that Ms Suu Kyi and other detained leaders be allowed to communicate with each other and that UN envoy Ibrahim Gambari be allowed back.
The US would "consider additional measures if Burma's leaders do not end the brutal repression".
Mindful of the limits of US influence with Burma, Mr Bush renewed his appeal for China and India to do more.
China, the closest the isolated junta has to an ally, has expressed concern about the crackdown. It helped facilitate Mr Gambari's visit earlier this month but has been reluctant to go further.
Posted by Democratic Information Department at 11:36 AM0comments Links to this post
Myanmar embassies receiving 'Panties for Peace'
Updated Fri. Oct. 19 2007 7:19 AM ET
Posted by Democratic Information Department at 11:11 AM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 12:24 PM0comments Links to this post
Posted by Democratic Information Department at 1:53 AM0comments
Mar Mar Aye Speech at Fort Wayne Rally
ဖို့ တ်ဝိန်းမြို့ ရဲ့ လူထုနဲ့ တသားတည်းဖြစ်နေတဲ့
Posted by Democratic Information Department at 11:51 PM0comments Links to this post